သင့်ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ ရင်ကို တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်သွားစေမယ့် အပြုအမူ (၇) မျိုး… - CeleLove
ဒီလို ဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ဘက်က စနစ်တကျလုပ်ဆောင်လိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ လုပ်ဆောင်ပြုမူပုံလေးတွေက ကိုယ့်ကောင်လေးကို ဆွဲဆောင်လိုက်နိုင်တာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီလို ဆက်စီကျတဲ့ လုပ်ရပ်လေးတွေကတော့ ….
၁။ အားလပ်ရက် အတူရှိနေချိန်၊ အပန်းဖြေခရီးအတူသွားချိန်မှာ အဖြူရောင်ရှပ်အကျီ ပွပွကြီး ၀တ်နေတာမျိုး ”
အထူးတလည် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အနက်ရောင်ဂါဝန်က အမျိုးသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်သလားဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ အဲ့ဒီထက် သေချာတာကတော့ သင်ကပိုကရို ၀တ်ထားတဲ့ အဖြူရောင် ရှပ်အကျီပွပွကြီးတစ်ထည်ပါပဲ။ ဒါ သူတို့အတွက် ဆက်စီဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားတွေက ဖွင့်ဟထားကြပါတယ် …။
၂။ သူ့ကို တင်းကျပ်စွာ ပွေ့ဖက်လိုက်တာမျိုး ”
နှစ်ဦးသားဆုံချိန်မှာ စကားပြောနေရင်းနဲ့ သူ့ကို အမှတ်မထင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်လိုက်ခြင်းဟာ တစ်ဖက်လူအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ဖွယ် ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းလိုက်သလိုပါပဲ။ သင့်ဆီကရတဲ့ ရနံ့လေးတွေကြောင့်သာမက၊ တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ ပွေ့ဖက်မှုကြောင့် သူဘယ်လောက် ရင်ခုန်သွားလိမ့်မလဲ …၊
၃။ ဘာရယ်မလုပ် သူ့ပေါင်ကို လက်ကလေးနဲ့ ကစားမိလိုက်တာမျိုး ”
တစ်ဖက်က ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး ကလိနေတယ်ဆိုရင်တောင် ကျန်တစ်ဖက်က သူ့ကိုမကြည့်ပဲ သူ့ပေါင်ကို မထိတထိကစားလိုက်တာမျိုးကလည်း အမျိုးသားတွေအတွက် ရင်ခုန်စရာတစ်မျိုးပါတဲ့နော် …။
၄။ ချစ်သူရှေ့မှာ အပျင်းကြောဆန့်လိုက်တာမျိုး ”
ရင့်ကိုကော့၊ လက်ကိုတန်းပြီး အပျင်းကြောဆန့်လိုက်တာမျိုးဟာ သင့်ချစ်သူကို သင့်ကောက်ကြောင်းအလှကို မြင်ရစေတာမို့ ရင်ခုန်ဖွယ်အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ …။
၅။ သင့်ရဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက်တာမျိုး ”
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက အမျိုးသားတွေ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ထောက်ခံကြတဲ့ အရာထဲမှာ ခုလို သူတို့ချစ်သူကောင်မလေးတွေ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကိုက်ပြတာမျိုးဟာ ဆက်စီဖြစ်ပါသတဲ့ …။
၆။ သူ့ရှပ်အကျီလေးကို ၀တ်ထားတာမျိုး ”
ကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေးက ကိုယ့်တီရှပ်၊ ရှပ်အကျီ ၀တ်ထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်ယောင်္ကျားသားမဆို သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
၇။ ချွေးလေးတွေ စို့နေတာမျိုး ”
တစ်ခါတစ်လေ နေပူလို့၊ ဒါမှမဟုတ် အတူရှိနေချိန် ပူတဲ့နေရာတစ်ခုခုရောက်နေလို့ ကိုယ့်လည်ပင်း၊ လက် စတာတွေမှာ ချွေးဆို့နေတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်က နေရခက်နေပေမယ့် အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့ ဒါဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ နော် ….။ ။
သငျ့ခဈြသူကောငျလေးရဲ့ ရငျကို တဒိုငျးဒိုငျး ခုနျသှားစမေယျ့ အပွုအမူ (၇) မြိုး…
ဒီလို ဖွဈဖို့ ကိုယျ့ဘကျက စနဈတကလြုပျဆောငျလိုကျတာမြိုး မဟုတျပဲ အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့ လုပျဆောငျပွုမူပုံလေးတှကေ ကိုယျ့ကောငျလေးကို ဆှဲဆောငျလိုကျနိုငျတာမြိုးပေါ့။ အဲ့ဒီလို ဆကျစီကတြဲ့ လုပျရပျလေးတှကေတော့ ….
၁။ အားလပျရကျ အတူရှိနခြေိနျ၊ အပနျးဖွခေရီးအတူသှားခြိနျမှာ အဖွူရောငျရှပျအကြီ ပှပှကွီး ဝတျနတောမြိုး ”
အထူးတလညျ ရှေးခယျြထားတဲ့ အနကျရောငျဂါဝနျက အမြိုးသားတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျသလားဆိုတာ မသခြောပါဘူး။ အဲ့ဒီထကျ သခြောတာကတော့ သငျကပိုကရို ဝတျထားတဲ့ အဖွူရောငျ ရှပျအကြီပှပှကွီးတဈထညျပါပဲ။ ဒါ သူတို့အတှကျ ဆကျစီဖွဈတယျလို့ အမြိုးသားတှကေ ဖှငျ့ဟထားကွပါတယျ …။
၂။ သူ့ကို တငျးကပျြစှာ ပှဖေ့ကျလိုကျတာမြိုး ”
နှဈဦးသားဆုံခြိနျမှာ စကားပွောနရေငျးနဲ့ သူ့ကို အမှတျမထငျ တငျးတငျးကပျြကပျြ ပှဖေ့ကျလိုကျခွငျးဟာ တဈဖကျလူအတှကျ စိတျလှုပျရှားပြျောရှငျဖှယျ ခံစားခကျြကို ပေးစှမျးလိုကျသလိုပါပဲ။ သငျ့ဆီကရတဲ့ ရနံ့လေးတှကွေောငျ့သာမက၊ တငျးကပျြလှနျးတဲ့ ပှဖေ့ကျမှုကွောငျ့ သူဘယျလောကျ ရငျခုနျသှားလိမျ့မလဲ …၊
၃။ ဘာရယျမလုပျ သူ့ပေါငျကို လကျကလေးနဲ့ ကစားမိလိုကျတာမြိုး ”
တဈဖကျက ဖုနျးကိုဖှငျ့ပွီး ကလိနတေယျဆိုရငျတောငျ ကနျြတဈဖကျက သူ့ကိုမကွညျ့ပဲ သူ့ပေါငျကို မထိတထိကစားလိုကျတာမြိုးကလညျး အမြိုးသားတှအေတှကျ ရငျခုနျစရာတဈမြိုးပါတဲ့နျော …။
၄။ ခဈြသူရှမှေ့ာ အပငျြးကွောဆနျ့လိုကျတာမြိုး ”
ရငျ့ကိုကော့၊ လကျကိုတနျးပွီး အပငျြးကွောဆနျ့လိုကျတာမြိုးဟာ သငျ့ခဈြသူကို သငျ့ကောကျကွောငျးအလှကို မွငျရစတောမို့ ရငျခုနျဖှယျအခိုကျအတနျ့လေးပါပဲ …။
၅။ သငျ့ရဲ့အောကျနှုတျခမျးကို ဖိကိုကျတာမြိုး ”
ကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးက အမြိုးသားတှေ တဈညီတဈညှတျတညျး ထောကျခံကွတဲ့ အရာထဲမှာ ခုလို သူတို့ခဈြသူကောငျမလေးတှေ သူတို့ကို ကွညျ့ပွီး အောကျနှုတျခမျးကိုကျပွတာမြိုးဟာ ဆကျစီဖွဈပါသတဲ့ …။
၆။ သူ့ရှပျအကြီလေးကို ဝတျထားတာမြိုး ”
ကိုယျ့ခဈြသူ ကောငျမလေးက ကိုယျ့တီရှပျ၊ ရှပျအကြီ ဝတျထားမယျဆိုရငျ ဘယျယောကငြ်ျားသားမဆို သဘောကနြှဈခွိုကျကွမှာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
၇။ ခြှေးလေးတှေ စို့နတောမြိုး ”
တဈခါတဈလေ နပေူလို့၊ ဒါမှမဟုတျ အတူရှိနခြေိနျ ပူတဲ့နရောတဈခုခုရောကျနလေို့ ကိုယျ့လညျပငျး၊ လကျ စတာတှမှော ခြှေးဆို့နတေဲ့အခါ ကိုယျတိုငျက နရေခကျနပေမေယျ့ အမြိုးသားတှအေတှကျကတော့ ဒါဆှဲဆောငျမှုတဈခုပါပဲ နျော ….။ ။